चितवन लगेपछि के हुँदैछ पत्रकार रवी लामिछानेको पक्राउ घटना ? - Dna Nepal
चितवन लगेपछि के हुँदैछ पत्रकार रवी लामिछानेको पक्राउ घटना ?
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०२:०२
भरतपुर, साउन ३१ ।
प्रहरीले न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ गरी चितवन ल्याएको छ । कडा सुरक्षाका विच उनिहरुलाई मध्यरात बजे १ बजे चितवन ल्याइएको हो । उनिहरुको भरतपुर अस्पतालमा मेडिकल टेष्ट गरिएको छ ।
रवि लामिछाने सहित नियन्त्रणमा लिएकाहरुको तस्विर कैद गर्न भरतपुर अस्पतालमा पुगेका पत्रकारलाई छलेर प्रहरीले पछाडीको गेटबाट उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरीका कार्यालय पु¥याएको छ । प्रहरी कार्यालयको कष्टडीमा उनिहरुलाई कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधन दिएर राखेको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दान बहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन् । शुक्रवार सरकारी वकिलसंगको छलफल तथा परामर्शपछि थप प्रकृया अघि बढाइने उनले बताए ।